U-Elsa Punset: iincwadi esikucebisa ukuba uzifunde | Uncwadi lwangoku
E-Spain, bambalwa abantu abathanda uncwadi abangazange beve ngo-Elsa Punset. Iincwadi ezipapashayo ziphelelwa yinguqulelo yokuqala kwintsuku nje okanye iiveki. Ngapha koko, sinokuthi, ngaphandle koloyiko lokuba siphosakele, ukuba uElsa Punset ungomnye wababhali abakhethekileyo kubukrelekrele bemvakalelo eSpain, nakwilizwe liphela. Iincwadi zakhe, ngokungafaniyo nezinye osenokuba uzifundile, zilinganisiwe njengezona zibalaseleyo kuba ufundisa, hayi ngokuthe ngqo (kwaye uyadika) kodwa usebenzisa izikweko namabali enza ukuba uyeke ukucinga kwaye uqonde ukuba, ukuba bayazichaza ithiyori, ubungekhe Andiqondi.
Kodwa, Ngubani uElsa Punset? Zeziphi iincwadi ozibhalileyo? Apha sicacisa onke amathandabuzo onokuba nawo.
1 Ngubani uElsa Punset
2 U-Elsa Punset: iincwadi ezifanelekileyo
2.1 Iincwadi zika-Elsa Punset: Ingonyama yegadi
2.2 Yomelele, isimahla kwaye ifuduka: izindululo zokuphila kumaxesha angaqhelekanga
2.3 INcwadi yoHlaziyo oluNcinci
2.4 Iincwadi zika-Elsa Punset: Ibhegi yobhaka kwindalo iphela
2.5 IiDaredevils ekuKhangelo kweTyebo
2.6 Iincwadi zika-Elsa Punset: Molo ngokuhlwa, Bobiblú!
Ngubani uElsa Punset
I-biography ka-Elsa Punset isisa eLondon. Wazalelwa kwi-60s, ngakumbi kwi-1964; Nangona kunjalo, nangona azalelwa apho, wachitha ubomi bakhe eHaiti, eUnited States naseMadrid. Utata wakhe, u-Eduardo Punset, wayeyintandokazi yesayensi eyaziwayo kwaye kuyacaca ukuba wayifumana njengelifa.
Kubo bonke ubomi bakhe waphumelela kwiFilosofi nakwiileta kwiYunivesithi yaseOxford, kwaye une-degree ye-master in Humanities, enye kwi-Journalism (eyokugqibela kwiYunivesithi yaseMadrid) kunye neyesithathu kwiMfundo yesiSekondari evela kwiYunivesithi yaseCamilo José Cela eMadrid.
Umsebenzi wakhe wokubhala waqala ngeencwadi iRadical Innocence, iCompass yoomatiloshe beemvakalelo kunye nebhegi yobhaka kwindalo iphela (iindlela ezingama-21 zokuva iimvakalelo zethu). Kuzo zonke, ezi zimbini zokugqibela zezona zaphumelela kakhulu, nangona ubhaka ka-Una para el Universo waba ngowona mthengisi uphambili kwaye wakwazi ukuthengisa ngaphezulu kwe-150000 ikopi kuhlelo olupheleleyo lwe-14, hayi eSpain kuphela, kodwa nangaphandle kwelizwe: Japan, I-Itali, iGrisi, iMexico ...
En Ngo-2012 wasungula incwadi egxile ngakumbi kubantwana, iGadi yeGadi, ngempumelelo enkulu. Ngapha koko, kwi-2015 waqala ingqokelela yamabali anemifanekiso, abizwa ngokuba yi "Los Arevidos", kwaye wagxila ebantwaneni ukubanceda bajongane neemvakalelo zabo. Ke, unokufumana iimvakalelo ezinje ngovuyo, ukuzithemba, usizi, uloyiko, njl.
Enye yeencwadi zakhe zamva iNcwadi yeeNgcaciso eziNcinci, epapashwe ngo-2015 eyayikuluhlu lwezona zinto zithengisa kakhulu kwiinyani. Ngelo xesha, ipapashe iStrong, Free kunye neNomads: Izindululo zokuPhila kumaXesha aMangalisayo.
Ukongeza ekubeni ngumbhali, u-Elsa Punset ukwasebenzisile kwiinkqubo zikamabonwakude, ezinje nge-El Hormiguero (2010), iRedes (2012), okanye iLa Mirada de Elsa, icandelo lejelo leTVE yamanye amazwe ejongene nophuhliso lomntu.
U-Elsa Punset: iincwadi ezifanelekileyo
Ukuthetha nawe apha malunga nazo zonke iincwadi zika-Elsa Punset kuya kuba mnandi kakhulu, kwaye uya kudinwa kukusinika isihloko esinye emva kwesinye. Ekugqibeleni, uyakulibala eyangaphambili kwaye ukhumbule eyokugqibela kuphela.
Kwaye, nangona zingekho zininzi izihloko ngombhali, ezinye zingangcono kunezinye, zombini ngenxa yezimvo zabafundi kwaye kuba sicinga ukuba kufanelekile ukuba zifundwe ngaxa lithile ebomini. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zintoni? Qaphela:
Iincwadi zika-Elsa Punset: Ingonyama yegadi
Siqala ngencwadi yabantwana ethi, uyakholelwa okanye awukholelwa, ifihla ukufunda okuhle. Imbali isixelela Ingonyama ihlangana njani nentaka; Zombini ziyakhuselana kuba ingonyama igcina iinkawu kunye neenyoka, ukugcina intaka ikhuselekile; kwaye oku kususa amakhalane engonyameni.
Kodwa kuthekani ukuba ingonyama ikuxelela enye yezona mfihlo zifihlakeleyo ebingafuni kuxelela mntu?
Yomelele, isimahla kwaye ifuduka: izindululo zokuphila kumaxesha angaqhelekanga
Le ncwadi yenye yokugqibela epapashwe ngu-Elsa Punset. Kuyo ufuna ukunceda abantu abaqaphela ukuba kukho utshintsho kubomi babo, kwindlela abanxibelelana ngayo, abasebenza ngayo ... kwaye bazame sisebenza njengesikhokelo sokulawula uxinzelelo kunye nokuguqula umntu ukuba abe luhlobo loluntu esinalo ngoku.
Incwadi engeyongozi ukuyifunda kuba ngokuqinisekileyo uyachaza kunye neemeko ezichazwe kuyo.
INcwadi yoHlaziyo oluNcinci
Njengoko incwadi icacisa, xa ulambile, uyazi ukuba wenzeni. Xa enxaniwe, ngokufanayo. Kodwa, Kwenzeka ntoni xa sibuhlungu, siphoxekile ...? Amaxesha amaninzi asazi ukuba singajongana njani nezo mvakalelo kwaye lonto isenza singonwabi.
Ke ngoko, apha umbhali uzama ukukunceda ukwazi ukulawula ezi ntlobo zeemvakalelo, ezinje ngoxinzelelo, ukungabi nathemba, iimeko ezinobungozi, uloyiko, umsindo xa into isongamela, njl.
Iincwadi zika-Elsa Punset: Ibhegi yobhaka kwindalo iphela
Kuyo uyakufumana imibuzo emininzi, ngaxa lithile ebomini bakho, okwazileyo ukuzibuza yona. Umzekelo, Ngaba uyazi ukuba kutheni sinomona? Kutheni sifuna ukuba nabahlobo ukuze sonwabe? Okanye kutheni silila? Imibuzo yemihla ngemihla, uhlobo esijongana nalo mihla le, ukanti asiqondi ukuba iimpendulo zinokubenza ngcono ubomi.
IiDaredevils ekuKhangelo kweTyebo
Le ncwadi yeyesibini kwingqokelela yeLos Atrevidos, kwaye siyikhethile kuba enye yeemvakalelo ejongene nazo kukuzithemba. Uninzi lwabantwana luyona ngokungabinayo, okanye ukungabi nayo into ephantsi, nto leyo ebenza bazive ngathi abanakho ukwenza nto. Abalingisi ifuthe kwimimoya yabo kunye namandla okujongana nemihla yabo yemihla ngemihla: izifundo, ubuhlobo, njl. Ngesi sizathu, uElsa Punset kunye nencwadi bafuna ukunika abazali, kunye nabantwana, izixhobo zokuphucula ukuzithemba kwabantwana kunye nobukrelekrele bemvakalelo.
Iincwadi zika-Elsa Punset: Molo ngokuhlwa, Bobiblú!
Le ncwadi iyinxalenye yengqokelela yabantwana entsha ekhutshwe ngu-Elsa Punset yeencwadi ezijolise kwezincinci. Kuyo sifumana "inja" kunye nomntwana, oyinyama negazi, ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba wonke umntu abize ngokuba nguBobiblú.
Yenzelwe ntoni le ncwadi? Kulungile ukunceda abancinci ukuba bajongane neemvakalelo zabo, okanye neendlela eziqhelekileyo, njengakule meko, ukuya kulala.
Ngoku lithuba lakho lokuba ubone iincwadi zika-Elsa Punset ozithanda kakhulu okanye ezo zitshintshe ubomi bakho. Ngokuqinisekileyo bakho!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » U-Elsa Punset: Iincwadi esizicebisayo